Isikhathi Samaqiniso: Izinyathelo Ezi-8 Zokulungela Martech Zone
Ngasekupheleni konyaka odlule ngimele ozakwethu ukuthi enze isethulo kuGoogle Umzuzu Weqiniso. Ngenkathi kunethamo lomzamo nezinto ezibonakalayo ezifakwe ekubhaleni isu, kubakhangisi abaningi besimanje izinto zisisekelo. Ngokuyisisekelo, umzuzu wokwenza izinqumo lapho uthatha isinqumo sokuthenga yi- Umzuzu Weqiniso - noma umane ZMOT.
Nakhu Isethulo se-ZMOT Ngenzile:
Nayi ividiyo eningiliziwe ngaphezulu esihlokweni nemboni ezenzakalelayo njengesibonelo:
Ngenkathi i-ZMOT ingahle ingaguquki, iGoogle ibala uhlu lwamathiphu wokulungiselela ayi-8 engikholelwa ukuthi kufanele afakwe kunoma yiliphi isu lokumaketha online.
Qala ngomugqa wakho ophansi - Uyini umgomo webhizinisi lakho?
Lungela Ukukala - Kufanele ukwazi ukukala umphumela ukuze wenze ngcono.
Qala ngezisekelo - Abantu bakuthola kanjani, bazibandakanye futhi bathenge kanjani kuwe online?
Gcina izithembiso zakho ze-ZMOT - Uma bekuthola, ingabe ubanikeza ngolwazi abebelufuna?
Landela umthetho we-10/90 - Tshala imali engu-10% wenzuzo yakho kumathuluzi nezinsizakalo zokukhulisa ibhizinisi lakho.
Phambili Komdlalo - Ungagxili nje ekutheni umncintiswano wakho ukuphi, gxila lapho uzoba khona noma ubuke kabanzi ukuthi bakuthola kanjani.
Bheka Ukuguqulwa Okuncane - Akukona nje ngokuthengwa, bukela imisebenzi yomphakathi, okubhaliselwe, okulandwayo, ukubhaliswa, njll.
Qala Ukuhluleka Ngokushesha - Hlehla emuva kusu elikhudlwana bese ubheka izindlela zokusheshisa ngezinga elincane - hlala ushesha.
Landa imininingwane ephelele kufayela le- Ishidi lokusebenzela le-ZMOT bese uhlola Umzuzu Weqiniso isayithi ukuthola eminye imininingwane.
Tags: ukumaketha okuzenzakalelayoyezimotoimboni yezentengiso yezimotoGoogle +umzuzu onguziroumzuzu weqinisoI-ZMOT